Mpanao gazety – Fampananan-kery ny lalàn’ny serasera : « Ho tompon’andraikitra eo amin’ny tantara ny fitondrana…» (NewsMada) | AEMW
Mpanao gazety – Fampananan-kery ny lalàn’ny serasera : « Ho tompon’andraikitra eo amin’ny tantara ny fitondrana…» (NewsMada)
Tsy an-kiandriandry taorian’ny fahadisoam-panantenana. Nivory ary nandray fanapahan-kevitra sy nanasonia izany ny mpanao gazety tetsy Antsakaviro, omaly. Nivoitra amin’izany ny ahiahy amin’ny hoavin’ny fifandraisana sy ny serasera amin’ny hirosoan’ny fitondrana hampanan-kery izany lalàna izany.
«… Tompon’andraikitra feno manoloana ny tantatra amin’ny mety ho vokatry ny fampanana-kery ankamehana ilay lalàn’ny fifandraisana ny fitondrana…Manamafy izahay fa tsy hitondra soa ho an’ny firenena izany… » , hoy ny fanambarana. Nanterin’ny mpanao gazety fa mbola azo atao, araka ny lalàna ny famerenana handinihana ny lalàna mifehy ny fifandraisana eny anivon’ny parlemanta raha manao izany an-kitsim-po ny hery rehetra. Na izany aza, nilaza ny mbola vonona ho amin’ny fifampidinihana ny mpanao gazety ary tsy manda ny tolokevitry ny filoham-pirenena. « Mandray sy mandinika izany sosokevitra izany izahay amin’ny hametrahana sehatra ifampidinihana sy manokana adihevitra, efa aorian’ny fampananan-kery ilay lalàna… Vonona hatrany hifampidinika amin’ireo hery rehetra voakasiky ny fanamboarana ny fehezan-dalàna mba hahatongavana amin’ny lalàna azon’ny rehetra ekena », hoy izy ireo.
Fihaonana tsy araka ny niheveran’ny mpanao gazety azy
Notsiahivin’ny fanambarana fa iraisan’ny mpanao gazety ny fanapahan-kevitra, nanao sonia ny 16 aogositra teo. Nanterina koa ny fankasitrahana ireo mpanao gazety manerana ny Nosy, nanasonia izany, niantso ny filoham-pirenena hampihantona ny hampanan-kery ilay fehezan-dalàna. Nisaoran’ny mpanao gazety koa ny namalian’ny filoha ny fihaonana na tsy araka ny niheverana azy aza. « Nandiso fanantenana izany noho ny tsy fahavononany hanolotra indray ilay lalàna, hodinihina na teo aza ny ezaka nataonay, handresena lahatra azy », hoy izy ireo. Mbola mametraka ahiahy hatrany koa anefa ny mpanao gazety, manoloana ny dingana hokasain’ny fitondrana hirosoana amboletra. « Marobe ireo sehatra sy fikambanana na ankolafin-kery hatramin’ny masoivoho vahiny samihafa, miantso ny hamerenana ny handinihana izany ary koa ny hiadiana hevitra.. », hoy ny mpanao gazety.
Hanokatra sehatra hifampidinihana ny filoham-pirenena
Tsiahivina fa nampanantena ny hanokatra sehatra hifampidinihana, niainga amin’ny fanamarihan’ny HCC momba ilay lalàn’ny fifandraisana, ny filoha Rajaonarimampianina, afakomaly teny Iavoloha raha nihaona tamin’ny mpanao gazety. Nohitsiny kosa anefa fa tsy hihemotra ny tenany fa hampihatra io lalàn’ny fifandraisana io noho ny fahatahorany ireo depiote. « Efa tapitra ny adihevitra ary efa an-dalana ny famoahana hampanan-kery ny fehezan-dalàna mifehy ny fifandraisana », hoy izy. Midika io fa tsy nampiasa ny fahefana ananany hamerina ny handinihan’ny parlemanta ny mpitondra, araka ny fangatahan’ny mpanao gazety izy. Eo koa ny tahotra ireo depiote vitsy anisa, 18 nandany io lalàna io.
Sahiran-kevitra ihany anefa ny mpanao gazety manoloana izany. « Tsy mbola fantatra ny tetiandro na daty hanaovana izany na koa ahazoana antoka hanaovana izany. Iza avy koa ireo mpandray anjara. Tsy voafaritra ny momba ireo andininy hiverenana hodinihina na koa ny fanovana ny andininy », hoy ny mpanao gazety Iloniana Alain, anisan’ny niatrika ny fihaonana teny Iavoloha.
Araka izany, hiroso indray amin’ny fanaovan-tsonia io fanambarana io indray izany ny mpanao gazety. Andrasana ny ho tohiny.
← 200 tapitrisa Ar ho an’ireo distrika : tratra aoriana ny fanoloran’ny CLD ny tetikasa (NewsMada)
Fitantanan-draharaham-panjakana : nofoanana noho ny fandevenana ny filankevitry ny minisitra (NewsMada) →